အိမ်ထောင်ပရိဘောဂနှင့် ဥယျာဉ်ပန်းခြံပစ္စည်းများ - 2in1 အကင်စက် Price in Myanmar | Myanmarkt Marketplace | Myanmarkt
အိမ်ထောင်ပရိဘောဂနှင့် ဥယျာဉ်ပန်းခြံပစ္စည်းများ classified: အသစ် 2in1 အကင်စက်
2in1 အကင်စက်အသစ်လေး ရောက်ပီနော် 😍😍😘 Price 18500 Ks 😘😘😘 အိမ်မှာမိသားစုနဲ့ဖြစ်ဖြစ် သူငယ်ချင်းများစုပြီး partyလုပ်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် အသား ငါး ငါးခြောက် အသီးအနှံများကို လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် ကင်စားလို့ရတဲ့စက်လေးပါ လျှပ်စစ်နဲ့အသုံးပြုရပြီး မီးအပူချိန်ကိုလဲလိုသလို အတိုးအလျှော့ချိန်ဆလို့ရပါတယ် ဆီခံပြားပါတဲ့အတွက် ဆီတွေကွိုင်ပေါ်ကျမှာလဲ ပူစရာမလိုဘဲ အကြမ်းခံပီးလွယ်လွယ်ကူကူ အကင်လုပ်စားလို့ရတဲ့စက်လေးပါ BBQ ကြိုက်သူများ၊ မိသားစုများ၊ သူငယ်ချင်းများ အိမ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် ပျော်ပွဲစားခရီးထွက်င်ပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်တိုင်စိတ်တိုင်းကျ ကင်စားလို့ရတဲ့ အကင်စက်ပါ. မီးသွေး၊ ဂက်စ် မလိုပဲ လျှပ်စစ်မီးရှိရုံဖြင့် အသုံးပြုလို့ရပါတယ်. အောက်ကထောက်တိုင်ပါပါတယ်နော်😉 ဖြုတ်၊တပ်လို့ ရလို့ ဆေးကြောရာမှာလည်း လွယ်ကူအဆင်ပြေပါတယ်😍😘